अन्तिम खेलमा पुगेको लिग
अन्तिम खेलमा पुगेको लिग आक्रामक खेलको रणनीतिमा दाबेदार टिम
ऋग्वेद शर्मा बुधबार, माघ २९, २०७६, ०६:२०
काठमाडौं- सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबलमा १२औँ चरणको अन्तिम खेलमा आज जावलाखेल युथ क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब खेल्दैछन्। यसपछि हरेक टिमको एक खेल बाँकी रहन्छ। तर, सबै ध्यान मछिन्द्र र आर्मीबीचको अन्तिम खेलमा अड्किएको छ। जसमा विजेताको टुंगो लाग्नेछ।
१२औँ चरणको खेलले सरस्वती युथ क्लब रेलिगेसनमा पर्‍यो भने उपाधिको दाबेदारी मछिन्द्र र त्रिभुवन आर्मी क्लबबीच मात्रै बाँकी बस्यो। त्यसले १३औँ चरणको अरु खेल फिका बन्ने भए पनि अन्तिम खेल रहँदासम्म उपाधि पक्का नहुनुको रोमाञ्चकता भने बनेको छ।
मछिन्द्र र आर्मीबीचको लिगको अन्तिम खेल फागुन ३ गते शनिबार दशरथ रंगशालामा हुनेछ। जसमा आर्मीलाई उपाधि जित्न बराबरी पर्याप्त हुनेछ भने मछिन्द्रले खेल जित्नैपर्ने हुन्छ।
अहिले १२ खेलमा ९ जित, २ बराबरी र १ हारसहित २९ अंक बनाएर आर्मी क्लब शीर्ष स्थानमा छ। १२ खेलमा ९ जित, २ बराबरी र १ हार नै भएर दोस्रोमा रहेको मछिन्द्रको २८ अंक छ। गएको वर्षको लिगमा रेलिगेसन नहुने एन्फाको नियमअनुसार यो लिगमा मछिन्द्रको एक अंक कम भएको हो। गएको वर्ष मछिन्द्र पुछारबाट दोस्रोमा थियो।
आफ्ना स्टार खेलाडीहरु मछिन्द्रमा गए पनि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब १२ खेल सकिँदा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। ७ खेल जितेर ४ बराबरी गर्दै १ खेल हारेको मनाङको २५ अंक रहेको छ। चौथो स्थानमा रहेको थ्री स्टार क्लबको १२ खेलमा २३ अंक छ।
लिग तालिकामा पाँचौँ स्थानमा रहेको जावलाखेलले ११ खेल खेल्दा १८ अंक बनाएको छ। छैठौँ स्थानमा रहेको नेपाल पुलिस क्लबको १७, सातौँमा रहेको च्यासल युथ क्लब, आठौँमा रहेको एनआरटी र नवौँमा रहेको संकटा तीनै क्बलको १५ अंक, १०औँ मा रहेको फ्रेन्ड्सको १४ र एक खेल कम खेलेर ११औँ स्थानमा रहेको हिमालयन शेर्पाको १० अंक छ।
१२ खेलमा दुई खेल मात्र जितेर दुई खेल बराबरी गरेको बिग्रेड ब्वाइज क्लबले ८ अंक र १२ खेलमा दुई खेल नै जितेर दुई बराबरी गरेको एपिएफले पनि ८ अंक नै बनाएको छ। रेलिगेसनमा परेको सरस्वतीको चार अंक छ। सरस्वतीले बिग्रेड ब्वाइज क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो भने हिमालयन शेर्पालाई ४–३ ले हराएको थियो।
के भन्छन् प्रशिक्षक?
लिगमा एक रेलिगेसन र एक विजेता टिम गरी दुई टिममा विशेष नजर हुनेछ। रेलिगेसनमा सरस्वती क्लब परिसकेको छ। विजेता टिममा भने आर्मी र मछिन्द्रको अन्तिम खेल फाइनल जस्तो बन्ने भएको छ।
लिग सुरु हुने बेला रेलिगेसनमा पर्दैनौँ भनेर लागिपरेका सरस्वती क्लबका प्रशिक्षक प्रदीप नेपाल स्ट्राइकर चल्न नसकेकाले आफूहरु रेलिगेसनमा परेको बताउँछन्।
‘हामी रेलिगेसन भयौँ त्यसमा मुख्य त हाम्रो स्ट्राइकर नै भएन। सुरुमा रेलिगेसनमा पर्दैनौँ भनेर नै खेल्न आएका थियौँ तर फिनिसिङ नै कमजोर हुँदा रेलिगेसन हुन पुगेका हौँ’, प्रशिक्षक नेपाल भन्छन्, ‘ हाम्रो स्ट्राइकिङ बाहेक अरु पक्ष त राम्रो नै हो। अब ब्यबस्थापन कसरी अगाडि बढ्छ क्लबको लक्ष्य त्यहीअनुसार नै हुन्छ।’
उता अन्तिम खेलमा बराबरीले पनि लिग उपाधि जित्ने आर्मी क्लबका प्रशिक्षक नवीन न्यौपाने आफूहरु अन्तिम खेलमा पनि आक्रामक रुपमा नै अघि बढ्ने बताउँछन्।
‘हामीले अहिलेसम्म सोचेअनुसार खेलिरहेका छौँ। अब अन्तिम एक स्टेप बाँकी छ। त्यसमा हाम्रो पहिलो रोजाइँका खेलाडीहरु नै हुनेछन्। हाम्रो बेन्चमा रहेका खेलाडी पनि बलिया नै छन्’, प्रशिक्षक न्यौपाने भन्छन्, ‘मछिन्द्र पनि राम्रो टिम हो। हामी अन्तिममा पनि राम्रो खेल देखाएर नै उपाधि उचाल्न चाहन्छौँ। बराबरी भए पनि हामी विजेता हुनेछौँ तर हामी बराबरी भन्दा जितका लागि नै बढ्ने छौँ।’
लिग अन्तिममा आइपुग्दा विभागीय बाहेकका टिममा खेलाडीको ‘स्ट्रेन्थ’ कमजोर भएकाले आफूहरु बलियो देखिने प्रशिक्षक न्यौपानेलाई लाग्छ।
‘अहिलेसम्म सबै खेल हेर्दा विभागबाहेक अरु टिमको स्ट्रेन्थ कमजोर भएको जस्तो लाग्छ। मछिन्द्रको टेक्निकल र विदेशी खेलाडी राम्रा छन्’ उनी भन्छन्, ‘विदेशी खेलाडीसँगै बिशाल राईलाई याद गरेर खेल्न सक्यौँ भने उपाधि जित्छौँ भन्ने छ। अन्तिम खेल गर र मरकै स्थिति हो। हामी सफल हुन्छौँ।’
मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवाल १२औँ खेलमा संकटालाई ३–१ ले हराउन सकेकाले अन्तिम खेल केही सहज हुने अनुमान गर्छन्।
‘हामीले संकटालाई जित्नै पर्ने थियो र जित्यौँ पनि अब विजेतामा बढ्न सजिलो भएको छ। हामी सानो टिमसँग पनि हारेका थियौँ त्यसैले डर त सबै खेलमा रह्यो नै’, प्रशिक्षक कटुवाल भन्छन्, ‘अन्तिम खेल फाइनल जस्तै भएको छ। त्यो खेलमा आर्मीको बराबरी नै काफी भएकाले जोगिएर खेल्छन् जस्तो लाग्छ। हामी भने जितका लागि अट्याकमा बढेर नै खेल्नुपर्ने हुन्छ।’
भरतको ५० गोलको खुसी
२०६३ सालमा संकटाबाट लिग सुरु गरेका भरत खवास अहिले आर्मी क्लबमा महत्वपूर्ण खेलाडी हुन्।
संकटाबाट पुलिस हुँदै फ्रेन्ड्स क्लब र आर्मीबाट लिग खेलेका भरत खवासले मंगलबार बिग्रेड ब्वाइज क्लबविरुद्ध गोल गर्दै लिगमा ५० गोल पूरा गरे। ५० गोलको खुसीमा रहेका भरत भन्छन्- ‘लिगमा गोल गर्न सजिलो छैन। टिम, व्यवस्थापन र अरु सबैको पनि सहयोग सल्लाह सुझावमा अघि बढ्दै गएँ र यहाँसम्म पुग्न सकेँ।’
भरतले २०६३ मा संकटाबाट ५ गोल, २०६६÷६७ मा फ्रेन्ड्सबाट ५ गोल, २०६८ मा पुलिसबाट १४ गोल गरेका थिए। २०६९ मा आर्मीबाट खेलेका भरतले ११ गोल गरेका थिए। त्यसपछि आर्मीबाट नै २०७० मा ४, २०७५ मा ४ र अहिले २०७६ मा ४ गोल गरेका हुन्।
‘यो नै अन्तिम होइन, सन्तोष साहुखलले जस्तो सय गोलसम्म पुग्ने सपना पनि छ। त्यो सजिलो त छैन तर पनि सन्तोष दाइको पाइला पछ्याउँदै उहाँलाई भेट्ने प्रयास गर्छु,’ बिग्रेड ब्वाइजसँगको खेलपछि भरत भन्छन्, ‘५० गोल पूरा हुँदा छोरीको सम्झना पनि आइरहेको छ। उनी सधैँ मैदानमा मेरो खेल हेर्न आएकी हुन्थिन् तर आज उनलाई मैदानसम्म ल्याउने मान्छे पनि भएन।’
थप मेहनत गर्दै अगाडि बढ्ने र राष्ट्रिय टिममा सर्वाधिक गोलकर्ता बन्ने सपना रहेको भन्दै भरत भन्छन्– ‘मेरो सपना राष्ट्रिय टिममा सर्वाधिक गोलकर्ता बन्ने हो, तर आर्मीको तालिमले कति खेलहरु छुटेका छन्। तर त्यो गोलको कीर्तिमान म पूरा गर्छु भन्ने विश्वास छ।’
टिम कमजोर तर सफल आशिष
अहिलेसम्म लिगमा सर्वाधिक गोलमा छन् एपिएफका आशिष लामा। तर पुछारबाट दोस्रोमा रहेको एपिएफ भने एन्फाको एक टिम रेलिगेसन पर्ने नयाँ नियमले मात्र जोगिन सक्यो। सोमबार फ्रेन्ड्स क्लबलाई ५–२ ले हराउँदा दुई गोल गरेका आशिषले जारी लिगमा आठ गोल गरिसकेका छन्।
लिगमा च्यासल युथ क्लबका कप्तान सन्तोष साहुखल ७ गोलसहित सर्वाधिक गोलको दोस्रो स्थानमा छन्। उनले जारी लिगमा नै पुलिस क्लबविरुद्धको गोलपछि ‘ए’ डिभिजन लिगको इतिहासमा एक सय गोलको कीर्तिमानसमेत बनाएका थिए।
यस्तै मनाङ मर्स्याङ्दीका बिमल राना र अन्जन बिष्ट साथै आर्मीका नवयुग श्रेष्ठले ६ गोल गरेका छन्। सरस्वतीका कजिम बुसारीले ५ गोल गरेका छन्।
लिगमा चार गोल गरेका खेलाडीमा मछिन्द्रका सोमिडे एडेलेजा, आर्मीका भरत खवास, हिमालयन शेर्पाका विजय श्रेष्ठ, फ्रेन्ड्सका उत्तम राई, मछिन्द्रका दीपक राई, पुलिसका सुमन लामा, थ्री स्टारका सन्जोग राई, संकटाका अजया कायोडे र आर्मीका सन्तोष तामाङ रहेका छन्।
यस्तै लिगमा तीन गोल गरेका खेलाडीमाहरुमा च्यासलका हायाटो वाकिनो, एनआरटीका दर्शन गुरुङ, थ्री स्टारका लाल राम्भारा, मछिन्द्रका देवेन्द्र तामाङ, एपिएफका प्रविण कुमार स्याङतान, फ्रेन्ड्सका वाग्नेर डे कार्मो र थ्री स्टारका अनन्त तामाङ रहेका छन्।
लिगमा अहिलेसम्म १ सय ६६ खेलमा १ सय ७६ गोल भएको छ। ८६ जना खेलाडीले गोल गरेका छन्। त्यसमा दुई गोल गर्ने खेलाडी १८ जना छन् भने एक गोल गर्ने खेलाडी ४५ जना रहेका छन्।
अब कसको खेल कोसँग?
लिगमा १२औँ चरणको एक खेल मात्र बाँकी छ। जसमा आज दिउँसो १ बजे एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा हिमालयन शेर्पा क्लब र जावलाखेल युथ क्लब खेल्दैछन्। यसपछि सबै टिमका एक खेल बाँकी रहनेछ।
बाँकी ७ खेलमा ६ खेल एन्फा कम्प्लेक्सकै कृत्रिम मैदानमा हुनेछ भने मछिन्द्र र आर्मीबीचको अन्तिम खेल दशरथ रंगशालामा हुनेछ।
अन्तिम चरणको खेलमा मछिन्द्र र आर्मीसँगै नेपाल पुलिसविरुद्ध फ्रेन्ड्स, एपिएफविरुद्ध बिग्रेड ब्वाइज, सरस्वती युथ क्लबविरुद्ध संकटा क्लब, हिमालयन शेर्पाविरुद्ध एनआरटी, थ्री स्टारविरुद्ध च्यासल युथ, जावलाखेल युथविरुद्ध मनाङ मर्स्याङ्दीको खेल हुनेछ।
मूलपानीमा पाँचौँ दिन : कमल, आसिफ र वाटमोर
हतास र निराश मेस्सी
कमलपोखरीमा काम रोक्न भनेपछि रातमा डोजर
खेलाडीको सम्मान कि पत्रकारको कमाइ? धेरै जोगी मठ उजाड जस्तो खेल संघहरु रहेको नेपाली खेलकुदमा पत्रकारको संस्थाले पनि खेलाडीलाई कमाइको माध्यम बनाउनु उचित होइन। खेलाडीको ठ... आइतबार, माघ ४, २०७७
खेलकै पर्खाइले अप्ठ्यारोमा खेलकुद अन्तर्राष्ट्रिय उपाधिपछि खेलाडीलाई पुरस्कार दिने घोषणा जसरी हुन्छन् त्यसको आधा मात्र पनि खेलमा कसरी निरन्तर गराउन सकिन्छ भन्नेमा ध्य... सोमबार, मंसिर २२, २०७७
बोलिरहेकै छन् गणेश थापा दुई दशक नेपाली फुटबलको बागडोर सम्हालेका गणेश थापालाई विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले प्रतिबन्ध लगाएको करिब पाँच वर्ष नाघ्यो। तर निलम्बि... शुक्रबार, मंसिर ५, २०७७
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भइदियोस् भन्ने लागेको छ : वामदेव गौतम बुधबार, माघ १४, २०७७
एपीएफद्वारा पुलिसलाई २०४ रनको लक्ष्य बुधबार, माघ १४, २०७७
म पनि खोप लगाउँथे, अहिले मसँग खोप कार्ड छैन : प्रधानमन्त्री ओली बुधबार, माघ १४, २०७७
‘प्रधानमन्त्री ओलीले रहरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भयो’ बुधबार, माघ १४, २०७७
प्रमोदले प्रतिलिपी अधिकार हनन् गरे : लिना रेग्मी बुधबार, माघ १४, २०७७
मृत्युलाई जितेर साइक्लिङ मंगलबार, माघ १३, २०७७